बिहे गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा छु 'गीतकार नेत्र अर्याल' - Reel Mandu
‘कुटुकुटु यो मुटु खाइरहन्छ
हरेकपलमा उनकै याद आइरहन्छ
ए हावा जाउ, हे बादल जाउ
मलाई सम्झि रोइछिन् की बिरानो पो भइछिन्
मेरि प्रियसीको खबर लिएर आउ’
यो गीतका गीतकार नेत्र अर्याल यतिबेलाका लोकप्रिय र रुचाइएका सफल सर्जकका रुपमा चिनिन्छ । गुल्मीको ईश्मा गाउपालिका ४ का अर्याल पेशाले सरकारी जागीरे हुन् । उनि वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र बबरमहलमा नायब सुब्बा पदमा छन् ।
अर्याल सरकारी जागीरे भनेर कमैलाई थाहा छ । कारण उनको नाम गीतकारको रुपमा बढि स्थापित भएरपनि हो । मिडियामा कमै आउन रुचाउने अर्याल भन्छन् ‘ म भन्दापनि मेरा सिर्जनाहरुले मिडिया पाएका छन्, धेरैको मन जितेका छन् यसैमा खुशी छु । ’
साङ्गितिक क्षेत्रका अग्रज सर्जक, कलाकारलेपनि अर्याललाई सफल र अब्बल सर्जकका रुपमा औंल्याउँछन् । अध्ययनको शिलशिलामा ०६३ सालमा भाइसँग काठमाडौं छिरेका अर्यालको शब्दमा ०६५–६६ मा पहिलो गीत बजारमा आयो ।
गीत लेखनभन्दा गायनमा रुचि राख्ने अर्यालले बिस्तारै गायनलाई रहर बनाउँदै लेखनलाई पेशा र सपना बनाउन पुगे । संभवतः उनको दोस्रो गीत ‘बिन्ती मेरो कोटीकोटीमा’ बजारमा आयो खुमन अधिकारी र विष्णु माझीको स्वरमा । उक्त गीत त्यो समय निकै चर्चित र रुचाइयो ।
सोहि गीतबाट अर्यालको नाम खोजीन थाल्यो । त्यसपछि लगातार उनको शब्दमा गीतहरु बजारमा आउन थाले, सबै गीतले दर्शक श्रोताको माया पाए । अर्यालको शब्द धेरै जसो कलाकारले गाइसकेका छन् ।
मायाप्रेम, बिछोड, देशभक्ती र समसामयिक विषयबस्तुलाई शब्दमा उतार्न अब्बल अर्यालले अहिलेसम्म करिव पाँच सय नजिक गीतमा शब्द लेखिसकेका छन् । घरपरिवार र आफन्त सबै अर्यालको दुवै पेशाबाट निकै सन्तुष्ट छन् । उनि भन्छन् ‘ घरमा बा–आमा खुशी हुनुहुन्छ गीत बज्दा, मेरो नाम आउँदा । ’
प्रस्तुत छ, अर्यालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
१. हिजोआज के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
अफिसको काम र गीतलेखनमा व्यस्त छु ।
२.गीत कुन समयमा बढिजसो लेख्नुहुन्छ ?
गीत लेखनमा समय र श्रोत भन्ने हुँदैनजस्तो लाग्छ । ठ्याक्कै यहि समय भन्ने छैन हाहाहा…
३. खेम सेन्चुरीसँग हुजरको निकै जमेको देखिन्छ, मुख्य के कुराको विशेष प्रभाव छ ?
हाम्रो सिर्जनात्मकमात्रै नभएर अझैं बढि दाइभाइको सम्बन्ध छ । हामी एकअर्कालाई सम्मान गर्छौ, एकअर्काको सिर्जनाको सम्मान गर्छौ । एकअर्कालाई परेको हरेक कुरामा सँगै हुन तयार हुन्छौ । यस्तै कारणले हामी निरन्तर छौ र पछिसम्म रहिरहन्छौँ ।
४. तपाइ त सरकारी कर्मचरीपनि हो, कसरी समय मिलाउनुहुन्छ ?
म मेरो दुवै कामलाई उत्तिकै माया गर्छु । एक कामले अर्को कममा वाधा परेको अवस्था पनि कहिल्यै छैन । दिउँसोको समय म अफिसकै काममा व्यस्त हुन्छु । त्यसपछिका समयमा गीत लेखन र बाँकी काम गर्छु । फेरि सिर्जना भन्ने कुरा समयभन्दा पनि मनबाट फुर्ने कुरा हो त्यसैले समय मिलाउन गाह्रो हुँदैन
५. गीत लेखेर आर्थिक हिसावले कत्तिको बलियो बन्न सकिन्छ ?
पछिल्लो गीत लेखेर पैसा आउँने राम्रो वातावरण छ । तर यति हुँदाहुँदैपनि गीत लेखेरै सबै कुरा व्यवस्था गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन । चुनौतीपुर्णसँग सन्तुष्ट हुने बाटोपनि छ ।
६. मिडियामा कम देखिनुको कारण के हो ?
मलाई मिडिया प्रचारभन्दापनि मेरो सिर्जनाले सबैको मन जितोस भन्ने लाग्छ । व्यक्तिभन्दा कामहरुको चर्चा होस् भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्ने मान्छे भएरपनि हुन सक्छ । तर मलाई मिडियाले धेरै माया र सपोर्ट गरेको छ ।
७. यो पेशामा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
म मेरा दुवै पेशमा निकै सन्तुष्ट छु । दुवैलाई उत्तिकै माया गर्छु ।
८. कसैको प्रेममा हुनुहुन्छ ?
घरपरिवार, साथीभाइको प्रेममा छु, माया प्रेम भनेको प्राकृतिक सत्य हो । तर विशेष कोहि एकको प्रेममा अहिलेसम्म परेको छैन । खाली छु, हाहाहा…
९. अब बिहे गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ?
घरमा बिहेको प्रेसर बढ्न थालेको छ म पनि अब लगभग बिहे गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा छु ।
१०. सरकारी जागीरको परिचय र गीत लेखनको पचिय कुन बाट चिनिदा बढि खुशी मिल्छ ?
गीत लेखन मेरो सपना हो । अर्को मेरो पेशा हो । मैले सुरुमै भने मेरा दुवै कामलाई म बराबरी माया गर्छु, दुवै मेरालागि उत्तिकै महत्व छन् । दुवैबाट परिचय मिलेको छ, जो मलाई निकै प्यो लाग्छ ।
११. काठमाडौं आइसकेपछिको बिर्सनै नसकिने पल दुख र सुखको के छ ?
मेरो पहिलो गीत बजारमा आउँदा खुशी भएको थिए ।
१२. फुर्सदको समयमा के गर्न रुचाउनुहुन्छ ?
हाहाहा… फुर्सदनै हुँदैन र पनि समय मिलेसम्म घुम्न र पढ्न बढि रुचाउँछु ।
१३. मनपर्ने ठाउँ ?
हाम्रो नेपाल सुन्दर छ । यहि भनेर भन्दापनि नेपालको हरेक ठाउँ उत्तिकै सुन्दर र रमणिय लाग्छ ।
१४. मन पर्ने कलाकार ?
यहि नै भनेर छैन । सहकर्मी लगायत अग्रज सबै मन पर्नुहुन्छ ।
दर्शकश्रोता मेरा भगवान हुनुहुन्छ । काम गर्दै जानेक्रममा केहि गल्ती कमीकमजोरी हुन्छन् । मेरापनि धेरै होलान् तर हजुरहरुले औल्याइदिनु भयो भने आगामी दिनमा म सुधार्ने कोशीस गर्ने छु । म सधैं तपाइहरुको सल्लाह सुझावको भोको छु र सोहि अनुरुप अघि बढ्दै छु । माया सधैं यसैगरी पाउँ मेरा भगवानरुपी दर्शकश्रोताप्रति सधै आभारी छु, धन्यवाद ।